Paññāvāsa Dhamma Vihara, 7505 Fairport Rd, Dallas, TX (2020)
Home > United States > Dallas, TX > Paññāvāsa Dhamma Vihara
Myanmar Thingyan Festival is cancelled .
Tentative events at Paññavãsa Meditation Center ( PMC).
Lunch Swan offering & Meditation Practice
မာဃပူဇာပွဲ နှင့် ထမနဲပွဲ
February92020 -တပို့တွဲလပြည့် ​ကျော် တရက် နေ့
< မာဃပူဇာနေ့ = တပို့တွဲလပြည့်နေ့ >
Sunday Retreat : February22020
Welcome to PMC , Every First & Third Sunday of the month 8:30 AM - 3:30 PM.
Tentative Future Retreat:
3 Days Memorial Day per guidance of Sayadaw Ashin PannadipaBhivamsa ;
May 23,24,25 2020
7 days Intensive Retreat per guidance of Mahasi ShweMinWun Sayadawgyi;
July 13-July 19 2020.
Details will be announced .
You are invited to Meditation Session on First Sunday & Third Sunday of Every Month
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ) သက်တော် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ပူဇာ ပွဲ
Thanksgiving Holiday ငါးရက် တရားစခန်း သိမ်းပွဲ
December 1st 2019 , Sunday
ငါးရက် တရားစခန်း သိမ်းပွဲ
အမျှ ကုသိုလ် ပေးဝေ
ဆရာတော် ကြီး ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ မှ တရားစခန်းသိမ်း သြဝါဒ တရားဟောကြားပြီး
ယောဂီများ၏ မေးခွန်းများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖြေကြား ပါသည်။
ဆရာတော် ကြီး သက်တော် ၇၀ ပြည့် မွေးနေ့ပူဇာ
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ
Thanksgiving Holiday တရားစခန်း နောက်ဆုံးနေ့
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ )
နံနက်ခင်း သီလပေး သတိပဋ္ဌာန် ရွတ်ဆို ပွားများ
Thanksgiving Retreat: Sunday Breakfast
သဒ္ဓာ ကြည်ဖြူ အလှုရှင် များက အရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း
သဒ္ဓာကြည်ဖြူ အလှုရှင် များက အရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ ) မှ ဟောကြားတော်မူသော ဝိပဿနာတရားတော်
Thanksgiving Holiday တရားစခန်း စတုတ္ထနေ့
Thanksgiving Retreat: Saturday
သဒ္ဓာ ကြည်ဖြူအလှုရှင် များက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ ) မှ ဟောကြားတော်မူသော နံနက်ခင်းအလုပ်ပေး တရားတော်
Thanksgiving Retreat: Saturday Breakfast
သဒ္ဒါ ကြည်ဖြူ အလှုရှင် များက အရုဏ်ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း
Thanksgiving Holiday တရားစခန်း တတိယနေ့
After Thanksgiving Day : Friday
တရားစခန်း တတိယနေ့ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်
တရားစခန်း တတိယနေ့ အလှုရှင်များက ဆရာတော် များအား နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း
တရားစခန်း တတိယနေ့ အာရုံဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း
တရားစခန်း တတိယနေ့ အာရုံဆွမ်း ဆက်ကပ်
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ ) မှ ဟောကြားတော်မူသော ဝိပဿနာ တရားတော်
Thanksgiving Holiday တရားစခန်း ဒုတိယနေ့
တရားစခန်း ဒုတိယနေ့ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ်
Thanksgiving Day Lunch Swan Offering by
1)Dr Khun Kyi Htun& Dr Yin Htwe Oo family
2)Rahul Vaid & Thit Thit Thein Han , Kate , Victoria & Johnny family
တရားစခန်း ဒုတိယနေ့ အာရုံဆွမ်း ဆက်ကပ်
Thanksgiving 5days Retreat in Dallas , PMC
Vipassana Meditation Practice before Dawn
& Morning Breakfast
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ ) မှ ဟောကြားတော်မူသော ဝိပဿနာအလုပ်ပေးတရားတော်
Thanksgiving Holiday တရားစခန်း ပထမနေ့
တရားစခန်း ပထမနေ့ အာရုံဆွမ်း ဆက်ကပ်
တရားစခန်း ပထမနေ့ နေ့ဆွမ်း ဆက်ကပ် လှုဒါန်းခြင်း
Haim Schweitzer & KyiThar Maung Maung family
ဆရာတော် ဦးရာဇိန္ဒ၏ တရားစခန်းအကြို တရား
Dhamma Talk by Ashin Rajinda
ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ (သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ မဟာကမ္မဌာနာစရိယ) (စင်္ကာပူ သတိ ပဌာန် တရားရိပ်သာ ) မှ ဟောကြားတော်မူသော နိဗ္ဗာန် ရောက် ကြောင်း အကျင့်ကောင်း တရားတော်
Day Meditation on Third Sunday of the month
Lunch swan offering to Sayadaw